Iindaba - Amawakawaka olwazi lokuprinta! Wazi ntoni wena?
Logama nje i-R + G + B imibala emithathu ingqubana ngokulinganayo, ngaphezulu kweshumi lezigidi zemibala inokuveliswa. Kutheni umnyama? Umnyama unokuveliswa xa umlinganiso we-RGB ulingana, kodwa kuthatha ii-inki ezintathu ukuvelisa umbala omnye, ongenakwenzeka ngokwembono yezoqoqosho. Ngapha koko, umnyama usetyenziswa kakhulu kwinkqubo yoyilo, yiyo loo nto kusetyenziswa ukushicilelwa kwemibala emine. Inye inqaku elinye: xa umnyama oveliswe yi-RGB uthelekiswa nomnyama odityaniswe ngqo ne-inki, eyokuqala inemvakalelo yelize, ngelixa eyokugqibela iziva inzima.
1. Ngommiselo wemibala emine, kulula kakhulu ukuba wonke umntu awamkele. Ilingana neefilimu ezine ngexesha lokukhutshwa, kwaye ikwalingana neendlela ezine ze-cyan, magenta, tyheli, kunye nomnyama (C, M, Y, K) kumajelo kwi-PHOTOSHOP. Ukulungiswa komjelo xa siqhubekeka nomfanekiso ngokwenene lutshintsho kwifilimu.
2. Imeshes, amachaphaza neekona, iminatha ethe tyaba kunye neenethi ezijingayo. Mesh: nge-intshi nganye yesikwere, inani lamachaphaza abekiweyo, i-175 mesh yento eshicilelweyo, kunye ne-60 mesh to 100 mesh for newspaper, kuxhomekeke kumgangatho wephepha. Ukuprintwa okukhethekileyo kunemisonto ekhethekileyo, kuxhomekeka kubume.
1. Ifomathi kunye nokuchaneka komfanekiso
Ukushicilelwa kwe-offset yanamhlanje kusetyenziswa ukuprinta okungasasebenziyo (imibala emine), oko kukuthi, umbala wombala wahlulwe wayimibala emine: i-cyan (C), imveliso (M), tyheli (Y), emnyama (B) ifilimu enamachaphaza amane, kwaye emva koko uprinte Ipleyiti yePS iprintwa kane ngumatshini weoffset, kwaye ke yimveliso eprintiweyo ngombala.
Imifanekiso yokuprinta yahlukile kwimifanekiso eqhelekileyo yokubonisa ikhompyuter. Imifanekiso kufuneka ikwimo ye-CMYK endaweni yemowudi ye-RGB okanye ezinye iindlela. Xa ukhupha, umfanekiso uguqulwa ube ngamachaphaza, okuchanekileyo: dpi. Ubuncinane bokuchaneka kwethiyori yemifanekiso yokuprinta kufuneka ifike kwi-300dpi / pixel / intshi, kunye nemifanekiso entle oqhele ukuyibona kwikhompyuter uhlala uziva umhle kakhulu kwisuphavayiza. Ngapha koko, uninzi lwazo yimifanekiso ye-72dpi RGB, kwaye uninzi lwazo alunakusetyenziselwa ukushicilela. Imifanekiso esetyenzisiweyo akufuneki iboniswe njengomgangatho. Ungacingi ukuba imifanekiso ingasetyenziselwa ukushicilela kuba ilungile nge-acdsee okanye enye isoftware, kwaye ilungile emva kokukhulisa. Kuya kufuneka zivulwe kwi-photoshop, kwaye ubukhulu bomfanekiso busetyenziselwa ukuqinisekisa ubunyani. Ukuchaneka. Umzekelo: umfanekiso onesisombululo se-600 * 600dpi / pixel / intshi, emva koko ubukhulu bayo bunokwandiswa buphindwe kabini kwaye busetyenziswe ngaphandle kwengxaki. Ukuba isisombululo singama-300 * 300dpi, sinokucuthwa kuphela okanye ubungakanani boqobo bungenakwandiswa. Ukuba isisombululo somfanekiso singama-72 * 72dpi / pixel / intshi, ubukhulu bayo mabuncitshiswe (ukuchaneka kwe-dpi kuya kuba kukhulu), kude kube sisisombululo sibe ngu-300 * 300dpi, sinokusetyenziswa. (Xa usebenzisa lo msebenzi, setha into ethi "Phinda uchaze iPixel" kubungakanani bemifanekiso kwi-Photoshop to none.)
Iifomati zomfanekiso oqhelekileyo zezi: TIF, JPG, PCD, PSD, PCX, EPS, GIF, BMP, njl. Xa kuyilwa, umbala we-TIF, umbala omnyama nomhlophe, i-EPS vector okanye iJPG
2. Umbala womfanekiso
Ngokumalunga namagama athile obuchwephesha njengokuprinta ngaphezulu, ukuprinta ngaphezulu, ukukhuphela ngaphandle, kunye nombala webala kushicilelo, ungabhekisa kwiziseko ezinxulumene nokuprinta. Nazi ezinye izinto eziqhelekileyo ekufuneka ziqwalaselwe.
Kukho umgca wabalinganiswa abluhlaza ocinezelwe kwipleyiti emthubi esezantsi, ke kwityile etyheli yefilimu, indawo yabalinganiswa abluhlaza kufuneka ingabinanto. Okuchaseneyo kuyinyani kuguqulelo oluhlaza okwesibhakabhaka, kungenjalo into eluhlaza okwesibhakabhaka iya kuprintwa ngokuthe ngqo kumbala otyheli, umbala uya kutshintsha, kwaye oqobo lohlaza okwesibhakabhaka uya kuba luhlaza.
Kukho umgca wabalinganiswa abamnyama abacinezelwe kwipleyiti ethile ebomvu, emva koko isikhundla sabalinganiswa abamnyama kwipleyiti ebomvu yefilimu akufuneki sikhutshelwe ngaphandle. Ngenxa yokuba umnyama ungabamba nawuphi na umbala, ukuba umxholo omnyama ukhutshiwe, ngakumbi isicatshulwa esincinci, impazamo encinci ekushicileleni iya kwenza ukuba umda omhlophe uvezwe, kwaye umahluko omnyama nomhlophe mkhulu, ekulula ukuwubona.
3. Imibala emine emnyama
Le yeyona ngxaki ixhaphakileyo. Ngaphambi kokukhupha, kuya kufuneka ujonge ukuba isicatshulwa esimnyama kwifayile yoshicilelo, ngakumbi ushicilelo oluncinci, lukwipleyiti emnyama kuphela, kwaye akufuneki ivele kwezinye iipleyiti ezinemibala emithathu. Ukuba iyavela, umgangatho wemveliso eprintiweyo uya kuthotywa. Xa iigrafiki ze-RGB ziguqulelwa kwimizobo ye-CMYK, isicatshulwa esimnyama ngokuqinisekileyo siya kuba yimibala emine emnyama. Ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela, kufuneka iqhutywe ngaphambi kokuba ifilimu ivelise.
4. Umfanekiso ukwimo yeRGB
Xa ukhupha imifanekiso kwimowudi ye-RGB, inkqubo ye-RIP ngokubanzi iyaziguqulela kwimowudi ye-CMYK yokuvelisa. Nangona kunjalo, umgangatho wombala uya kuncitshiswa kakhulu, kwaye imveliso eprintiweyo iya kuba nombala okhanyayo, hayi oqaqambileyo, kwaye umphumo mbi kakhulu. Umfanekiso uguqulwa kakuhle ube yimowudi ye-CMYK kwi-photoshop. Ukuba sisicatshulwa esibhaliweyo, kufuneka sigqibe kwinkqubo yokulungiswa kombala ngaphambi kokuba umfanekiso usetyenziswe.